Gigi Hadid : Na eny an-tanety na any anaty rano, tsy miala eny amin’ity olon-tian’i Zayn Malik ity mihitsy ny findainy. Ity farany no tena faly, satria dia mifampiresaka foana izy roa, amin’ny fotoana rehetra. Rehefa tsy mihaino hira moa izy izany.
Pink: Na dia efa eny ambony bisikileta miaraka amin’i Willow zanany aza, dia tsy mahafoy miresaka amin’ny namany mihitsy i Pink. Ny vadiny, Carey Hart koa moa toa variana ao anaty finday ao, toa azy ihany.
Hilary Duff: Betsaka amintsika no mankafy manao selfie, mitovy amin’ny ankabeazan’ny olona rehetra ihany ireo olo-malaza, toa an’i Hilary Duff.
Lewis Hamilton: mankafy ny teknôlôjia vaovao tanteraka ity mpanjakan’ny “Formule 1” ity. Isan’ireo mankafy manao selfie koa izy, hizarany ny fiainany amin’ireo mpanaraka azy marobe ao anaty tambajotra sosialy ao.
Scarlett Johansson: Sady mihazakazaka no miresaka amin’ny finday. Inona izany izao no ren’ilay olona miresaka aminy eo, tsy ny fitempon’ny fony sy ny fofon’ainy sempotra ve ?!